OnePlus Nord CE 5G waxaa lagu shaaciyey Snapdragon 750G iyo qiime aad u macquul ah | Androidsis
OnePlus Nord CE 5G waxaa lagu shaaciyey Snapdragon 750G iyo qiime aad u jaban
DaniPlay | | Mobiles, OnePlus
OnePlus waxay ku dhawaaqday waxa ay tahay soo gelitaankeeda cusub kadib xanta badan ee ku saabsan astaamaheeda, taas oo ka dhigaysa meel ugu yaraan soo jiidasho leh. OnePlus Nord CE 5G waa taleefan casri ah oo cusub oo leh awood weyn in kasta oo aanu haysan processor-kii ugu dambeeyay ee soo saaraha Qualcomm.
Nord CE 5G wuxuu si buuxda u galayaa khadka Nord, illaa iyo hadda loogu talagalay dhammaan noocyada isticmaaleyaasha, OnePlus Nord 5G oo ah qayb muhiim ah oo qoyska ka mid ah. Ixtiraamka qaar ka mid ah qiyamka, Nord CE ayaa timid si ay u bixiso isku xirnaanta jiilka soo socda iyo waxqabadka qiimaha tartanka.
💰 Ma rabtaa inaad ogaato qiimaha weyn ee aan helnay adiga loogu talagalay Waqooyiga CE 5G? Waa hagaag halkan guji oo ku hel taleefankan casriga ah qiimaha ugu fiican iyo dhammaan dammaanadaha
1 Noocyada cusub ee OnePlus Nord CE 5G
2 Processor weyn, RAM u keydsan, keydinta, iyo batari awood-sarre leh
3 Wadar ahaan afar kamaradood
4 Isku xirnaan badan iyo noocii ugu dambeeyay ee softiweer
5 Iftiin iyo isafgarad
6 Helitaanka iyo qiimaha
Noocyada cusub ee OnePlus Nord CE 5G
Moodelkani wuxuu ka bilaabmayaa xagga hore isagoo ku dhejinaya guddi nooca AMOLED ah oo ah 6,43-inji oo leh xal buuxa oo HD + ah, kaasoo kuu oggolaanaya inaad daawato waxa ku jira tayada sare. OnePlus Nord CE 5G wuxuu isku daraa HDR10 + iyo heerka cusbooneysiinta ee 90 Hz, saamiga 20: 9 iyo shaashadda ka ilaalinta xagashada.
Naqshadaynta OnePlus Nord CE 5G waa taxaddar iyadoo si faahfaahsan u faahfaahsan, shaashaddu waxay hor fadhidaa wejiga hore iyadoo ay adag tahay wax bir ah oo la arki karo jaleecada hore, xagga hoose oo kaliya dusha yar ayaa laga arki karaa. Sidoo kale, taleefanku wuxuu ku yimaadaa kamarad daloolin oo bidixda kore ah.
Processor weyn, RAM u keydsan, keydinta, iyo batari awood-sarre leh
Waxay imaaneysaa iyadoo ay ku shaqeyneyso Snapdragon 750G, Chip ka dhigi doonta mid isku mid ah oo waxqabad leh marka loo adeegsado codsiyada, iyo sidoo kale ciyaaraha fiidiyowga. Sawir gacmeedyadu waa Adreno 619, oo ku habboon haddii aad rabto inaad u wareejiso cayaaraha fiidiyowga ee ugu dambeeyay suuqa, marka lagu daro waxqabadka wejiyo badan oo kale.
OnePlus Nord CE 5G wuxuu leeyahay ilaa saddex xulashooyin xusuusta RAM ah, taas oo udhaxeysa 6, 8 ilaa 12 GB, iyadoo kuxiran midka la xushay, qiimaha ayaa ku kici doona qaabeyn wanaagsan. Xawaaraha RAM waa in la xaqiijiyaa, waxay muujineysaa inuu noqon doono LPDDR5X, marka wuu soomi doonaa markuu hawlgallada fulinayo.
Qodob muhiim u ah aaladaha cusub ee mobilada waa awooda keydinta, OnePlus Nord CE 5G labo ikhtiyaar ayaa lagu daray. Midka koowaad waa 128 GB, halka kan labaadna yahay midka loogu talagalay inuu wax walba badbaadiyo nooca macluumaadka, ha ahaadaan sawirro, dukumiintiyo iyo xitaa ciyaaro, oo wata 256 GB.
Baytariga OnePlus Nord CE 5G waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan, Maaddaama ay u mahadsan tahay Warp Charge 30T Plus waxay ka qaadi doontaa 0 illaa 70% nus saac oo keliya 30W. Waxay ku saabsan tahay 4.500 Mah, ku filan in la siiyo nolol waxtar leh maalinta oo dhan iyada oo aan loo baahnayn in loo maro kharash isticmaalka caadiga ah. Rarka ayaa soo galaya sanduuqa diyaar u ah inuu baxo.
Wadar ahaan afar kamaradood
Qalabka cusub ee OnePlus wuxuu galiyaa wadar ahaan seddex dareemayaal xagga dambe iyo mid xagga hore ah, midkoodna diiradda la saarayo. Dareemaha ugu weyn ee gadaal waa 64 megapixel sensor, waa mid ka mid ah kuwa ugu awooda badan suuqa, kan labaadna waa 8 megapixel super xagal ballaaran iyo kan saddexaad oo ah 2 megapixel monochrome.
Maaddaama ay tahay dareeraha kaliya ee xagga hore waxaad arki kartaa dalool laga qoday muraayad 16 megapixel ah, waxay kuu oggolaaneysaa inaad sawirro fiican ka qaadatid, sawirro iska qaadis ah, duubitaan fiidiyoow ah kuna habboon haddii aad rabto inaad sameyso shirar fiidiyoow ah Kaamirada ayaa ku duuban tayada HD oo dhan, sidaas darteed waa ku habboon tahay haddii aad rabto inaad ku soo rogto waxyaabo nuxur leh shabakadaha bulshada iyo bogagga kale.
Isku xirnaan badan iyo noocii ugu dambeeyay ee softiweer
El OnePlus Nord CE 5G wuxuu yimid sifiican oo qalabaysan kii ugu dambeeyay, oo ay ku jirto isku xirka mahadsanid xaqiiqda ah in lagu dhex dari doono processor-ka Snapdragon 750G. Waxay ka shaqeysaa 5G SA / NSA shabakadaha, marka lagu daro inay la yimaadaan Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS waxayna leedahay jaakad dhegaha lagu xiro. Furitaanka ayaa ku hoos jira shaashadda.
Waxay leedahay noocii ugu dambeeyay ee Android, kow iyo tobnaad iyo lakabka OxygenOS mar qalabku kabo, cusbooneysiiyo sidii caadiga ahayd waqti ka waqti. Sida haddii aysan taasi ku filnayn, waxay ballanqaadaysaa laba sano oo cusbooneysiin ah, sida ay waliba rabto OnePlus Nord 5G, kaas oo inkasta oo uu la yimid Android 10 haddana dhowaan loo cusbooneysiiyey Android 11.
Iftiin iyo isafgarad
Midka cusub ee OnePlus Nord CE 5G waa taleefan casri ah oo fudud, oo loogu talagalay inaad ku qaadatid jeebkaaga adigoon ogaanin marka laga reebo cabirrada dabiiciga ah. Taleefanka ayaa culeyskiisu yahay 170 garaam, halka cabirkiisuna yahay 159.2 x 73.5 7.9 mm, dhumucdiisuna ka yar tahay 8 milimitir oo aad u yar.
OnePlus wuxuu qaadaa tallaabada ugu dambeysa ee ah bixinta muuqaal cusub iyadoo la arkaayo in khadka Nord 10 iyo Nord 100 loogu talagalay dadweynaha oo aan u baahnayn in wax badan lagu qaato taleefanka. Sharadka tusaalahan ayaa ah in la siiyo isticmaaleha terminal leh awood iyo miyirqabMuuqaalkan ugu dambeeya waa midka ay calaamaddu xoogga saareyso.
EREYADA ONEPLUS CE 5G
MUUQAAL 6.43-inch AMOLED / Heerka Refresh: 90 Hz / HDR10 + / Full HD + (2.400 x 1.080 px) - Qiyaasta 20: 9
PRORESOR Snapdragon 750G
KAADHKA CARRUURTA Adreno 619
Kaydinta Gudaha 128 GB / 256 GB
KAAMARKA DAR 64 MP Sensor Main / 8 MP Super Wide Angle / 2 MP Monochrome Sensor
KAAMI HOR 16 Dareeraha dareeraha
NIDAAMKA HAWLGALKA Android 11 oo leh OxygenOS 11
BATARY 4.500 mAh oo si xawli leh ugu soo dallacaya Warp Charge at 30W
Isku xirnaanta 5G SA / NSA / WiFi 6 / Bluetooth / GPS / Dhagaha madaxa
DHIBAATOOYINKA Shaashadda shaashadda akhristaha
Qiyaasaha iyo Miisaanka 159.2 x 73.5 7.9 mm / 170 garaam
El OnePlus Nord CE 5G horey ayaa si rasmi ah loogu soo bandhigay, ayaa la iibin doonaa June 21, laga heli karo bogga AliExpress. Intaa waxaa dheer, waxaa jira dhiirrigelin taas oo lagu badbaadiyo in yar $ 20 oo leh kuuboon qiimo dhimis ah, ama waxa isku mid ah, qiyaastii 16 euro qiyaastii.
Waxaa lagu heli karaa midabada Dhuxusha Dhuxusha (madow), Silver Ray (qalin) iyo Blue Void (buluug) qiimahooduna wuxuu ka socdaa 299 euro oo ah nooca 6/128 GB, midka 8/128 GB wuxuu gaarayaa 329 euro kan 12/256 GBna wuxuu leeyahay qiimo dhan 399 euro (waxaa lagu heli karaa seddex cod).
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » OnePlus Nord CE 5G waxaa lagu shaaciyey Snapdragon 750G iyo qiime aad u jaban
Dib u eegista ZMI PurPods Pro, waxqabadka iyo qiimaha
9 kulan Pinturillo bilaash ah oo loogu talagalay Android